VULA IZIMVO ZEKHITSHI LOKUKHANGELA (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Vula izimvo zekhitshi lokuKhangela (Isikhokelo sokugqibela)
Vula izimvo zekhitshi lokuKhangela (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwigalari yethu yeengcinga ezivulekileyo zekhitshi kubandakanya iingcebiso zokuhombisa ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo.
Ukuvula ishelfu yenye yeendlela ezilula zokwandisa amandla okugcina ekhitshini. Ngaphandle kokuba kulula ukwakha, iishelfu ezivulekileyo ziyasebenza kwaye zinokongeza isimilo kunye nobuhle ekhitshini. Ukongeza, benza umsebenzi ekhitshini ubelula kwaye ukuhamba kwendlu kusebenza ngakumbi kuba konga ixesha ngokususa isidingo sokuvula iingcango. Izinto zibonakala kakhulu kwaye ziyafikeleleka, kodwa eyona nto uyithandayo malunga nokugcina isheluvu kukuba ikwenza ukuba ubonise ezinye zeengqokelela zexabiso lakho ezixabisekileyo njengenxalenye yoyilo lwekhitshi lakho.
Apha ngezantsi, sijonga ezinye izinto ezintle zekhitshi ezivulekileyo zokubeka iishelfu kunye neengcebiso malunga nendlela onokuthi uzitsale njengendawo esebenzayo kunye nekhaya lakho.
Ikhitshi elimhlophe elineeShelfu ezivulekileyo
I-DIY evulekileyo yokuKhusela iKhitshi
Ikhitshi eliVulekileyo leShelving
Vula iishelufu zeenkuni
Ezona ndidi zeNkuni zokwenza iishelufu ezivulekileyo
Ikhitshi elincinci elineShelfu evulekileyo
Indlu yasefama Ikhitshi eneeShelfu ezivulekileyo
I-Rustic evulekileyo yokuKhitshisa iKhitshi
Ikhitshi elimnyama elinamashelfu avulekileyo
Vula iShelving Galley Kitchen
Isiqithi seKhitshi esinamashelufu avulekileyo
Iikhabhathi zasekhitshini ngaphandle kweminyango
Indlela yokwenza isitayile esivulekileyo seShelf
Yintoni ekufuneka uyibeke kwiisheluvu zasekhitshini ezivulekileyo
Intandokazi yakudala phakathi kwabanini bamakhaya kunye nabaqambi ngokufanayo ziikhitshi ezimhlophe. Ikhitshi elilawulwa kukuthwala ikhabethe elimhlophe liphuma ngaphandle kwemvakalelo eqaqambileyo nomoya. Ngapha koko, awukho omnye umbala onokutshatisa ukujonga okutsha, okubukekayo. Kuphelelwa lixesha, kuhle kwaye kulula kakhulu emehlweni.
Ukongeza kubuhle bayo beklasikhi, iikhitshi ezimhlophe zibonelela ngokuguquguquka koyilo kunye nokuguquguquka, okukuvumela ukuba wazise nawuphi na umbala kwisikimu. Ungazama ngokukhululekileyo umbala weendonga zakho, imiphezulu yeetafile, i-backsplash, i-flooring, izixhobo kunye neeshelfu ezivulekileyo.
Kwiikhitshi ezimhlophe, zininzi izinto onokukhetha kuzo imibala kwiishelufa ezivulekileyo. Iya kuxhomekeka kuphela kwisitayile sonke sendawo kunye nembonakalo ofuna ukuyiphumeza. Zombini ezihambelana kunye nemibala eyahlukileyo zinokusetyenziselwa iishelufu ezimhlophe ezivulekileyo zekhitshi. Nangona kunjalo, eyona mibala mihle kwaye igqityiwe ukuhamba nayo (1) mhlophe, (2) ukungathathi cala kokukhanya, (3) ukungathathi cala okumnyama kunye (4) nokugqitywa kweenkuni.
Iishelufa ezivulekileyo ezimhlophe zilungile kwiikhitshi ezimhlophe ezinesiko lendabuko okanye langoku. Iishelufu ezivulekileyo ezimhlophe ezidityaniswe nekhabhathi emhlophe zenza ukucoceka ngokubanzi. Ukukhanya okungathathi hlangothi kwelinye icala zii-beige, iimpondo zendlovu, iikhrimu, igrisi, umbala opholileyo okanye imibala emhlophe ngesandi esiphantsi esifudumeleyo. Kuxhomekeka kuhlobo lokugqitywa, nokuba uxinzelelo, yinto yakudala okanye i-gloss ephezulu, le mibala inokusetyenziselwa iikhitshi ezimhlophe zesintu, zangoku okanye zangoku.
Ukungathathi cala okumnyama njengamnyama, amalahle kunye negraphite yeyona mibala mihle onokuhamba nayo ukuba ufuna ukwenza umahluko phakathi kweeshelfu ezivulekileyo kunye nekhitshi elimhlophe lonke. Ukugqitywa kweenkuni, kwelinye icala, kukwadala umahluko phakathi kweeshelfu ezivulekileyo kunye nekhabhathi emhlophe, kodwa ngokungafaniyo nokungathathi cala okumnyama, zinika indawo indawo yokuziva ucocekile kunye nobushushu bendalo.
Ngaphandle kokusebenza ngokugqwesileyo, indawo evulekileyo ekhitshini inokubonelela ngekhefu elinokubangela ukuba isikimu sombala esithandekayo sibe nomdla ngakumbi. Eli khitshi, umzekelo, linamashalofu omthi amnyama ahluke kakuhle kuyo yonke ikhabhathi emhlophe kunye nebhodi yethayile yangaphantsi yeklasikhi.
Enye yezinto eziphambili zoyilo ezisetyenziswe kuyilo lwangaphakathi zi-symmetry. Yenza ngokulula ibhalansi kunye nolingano kuyilo lwekhitshi ngokubeka iishelufa ezivulekileyo kumacala omabini efestile.
Enye indlela yokwenza ukujonga okulinganayo kunye nokuhambelana kwekhitshi lakho kukumatanisa ukugqitywa kweeshelfu zakho ezivulekileyo kunye nezinye iziqwenga zefanitshala, ezinje ngezihlalo zebhari. Unokuncedisa amashalofu akho avulekileyo ngokugqiba umgangatho.
Isikimu sombala omnyama nomhlophe sisimboli somqondiso esinokwenza iikhikhini kunye nezinye iindawo zivelise ubuhle kunye nobunkunkqele. Kule khitshi, iishelufa ezimnyama ezivulekileyo ezimnyama zihonjiswe kakuhle ngecwecwe elimnyama lokubala, kodwa zahluke ngokucacileyo kwikhabhathi emhlophe yeklasikhi.
Iishelufu ezimbalwa ezivulekileyo zokhuni zinokukhawuleza hlaziya uyilo lwekhabhathi yekhitshi . Le khitshi yemveli yendabuko yazisa umhlaba omtsha ngokusetyenziswa kodonga oluxhonywe kwiincanda zomthi ezihambelana nebhloko kwisiqithi sebar.
Ngaphandle kokuba neshelu evulekileyo eyenziwe ngumenzi wekhabhathi yekhitshi ethembekileyo, unokukhetha ukuyenza njengeprojekti ye-DIY. Uninzi lweeshelfu luyilo olulula olunokwakhiwa ngokulula kwaye lufakelwe, kusetyenziswa izinto ezifumaneka ngokulula kwiivenkile zokuphucula ikhaya.
Izinto ezahlukeneyo zinokuphononongwa njengokhuni oluqinileyo, iplanga, i-MDF okanye isinyithi. Kukho ukhetho lokuba wakhe iishelufa ukusuka ekuqaleni usebenzisa izinto ozikhethileyo, okanye uthenge indawo eseleyo esele ikulungele ukufakwa. Izinto kunye noyilo lweeshelfu zakho ezivulekileyo ziya kuxhomekeka kakhulu kwisitayile esele sikhona kwikhabhathi yekhitshi (njengoko kufuneka ibumbane) kunye nomsebenzi ojolise kuwo - Zeziphi izinto oceba ukuzibeka kuzo? Ucinga ukuba iya kuba nzima kangakanani? Ufuna malini ukugcinwa?
Xa kuziwa ekubekweni kweeshelfu zakho ezivulekileyo ze-diy, ungazixhoma kwiindawo ezininzi, kodwa ukhetho olucacileyo luya kuba kukusebenzisa njengendawo yokugcina izinto endaweni yekhabinethi eqhelekileyo enezingcango. Ezinye iindawo eziqhelekileyo zokuxhoma iishelufa ezivulekileyo ekhitshini zijikeleze iwindow, phambi kodonga lwe-aksenti okanye i-backsplash yetile, ejikeleze uluhlu lweebhedi okanye ujikeleze isinki. Iindawo ezingalindelekanga ezinje ngeekona ezintsonkothileyo okanye isiqithi sekhitshi zikwindawo ezifanelekileyo zokubeka ishelfu evulekileyo kuba ziguqula indawo engasetyenziswanga ukuba isebenze ngokupheleleyo ekhitshini.
Ukukunceda ucwangcise ubeko lwendawo yakho kukho iintlobo ngeentlobo ze Iinkqubo zoyilo lwekhabinethi yasekhitshini iyafumaneka. Oku kunokukunceda ube nomfanekiso ngqondweni wenkangeleko ngaphambi kokwenza nakuphi na ukuthengwa kwezinto okanye ukufakwa.
Ukophuka kuyilo oluqhelekileyo lweeshelufu ezivulekileyo esiqhele ukuba sisiqwenga somda odadayo eludongeni, ungasebenzisa izibiyeli zenkxaso yesinyithi. Izibiyeli zentsimbi aziyi kuxhasa kuphela ubunzima obongezelelekileyo bezinto ogqiba ukuzibeka kwiishelufa ezivulekileyo, kodwa ikwanika ukugxininisa kuyilo.
Ayizizo zonke uyilo lwekhitshi ezifuna imigangatho yamashalofu avulekileyo. Ngamanye amaxesha, ukwenza lula yeyona nto iphambili. Olu luyilo, umzekelo, lusebenzisa isiqwenga esincinci, esinye somqolo kwisigqubuthelo esimhlophe esimhlophe sokulungelelanisa ukubukeka okuthe tye kunye nokuhamba kakuhle kwale khitshi yanamhlanje.
Kule ndawo yekhitshi yeklasikhi yangoku, iishelufu ezivulekileyo ezenziwe ngamaplanga kwindawo yokukhanya yendalo yokuthelekisa ngokuchaneka kakuhle kunye nepateni engaqhelekanga yekhawuntara yokuphamba kunye nethayile eprintiweyo ebuyela umva. Iishelufa ezivulekileyo zibonelela ngekhefu elibonakalayo elifunekayo kwindawo exakekileyo yekhitshi.
Iishelufu ezivulekileyo zilunge kakhulu kumakhitshi amancinci kuba enza ukuvuleka kunye nokukhohlisa kwendawo enkulu. Iishelufa ezivulekileyo ezenziwe ngomthi kweli khitshi zikwasebenza njengembonakalo enencasa yezixhobo ezenziwe ngesandla kunye nezityalo zangaphakathi ezenza ukuba indawo encinci izive ifana nasekhaya kwaye ipholile.
Iishelufu zokhuni ezineebakaki zentsimbi zezinye zezona zinto zixhaphakileyo zoyilo lweeshelfu. Ngaphandle kokulula kwayo, isebenza kakhulu kwaye ithembekile. Uyilo oluvulekileyo lokusebenzisa ngokwakho lusebenzisa isibiyeli se-engile yesinyithi ekugqibeni okumnyama ukuncedisa lonke ulungiselelo lombala wekhitshi.
Ikhitshi le-DIY elivulekileyo elinokusetyenziswa linokusetyenziselwa ukwenza udonga olusisigxina ukuba lubambe ngakumbi iso kwaye lisebenze. Eli khitshi, umzekelo, lisebenzisa iishelfu ezivulekileyo ezenziwe ngomthi ezibekwe ngokuchasene nodonga lwetayile engaphantsi. Qaphela ukuba iishelufa ezivulekileyo zisebenza njani njengendawo ekugxilwe kuyo endaweni.
Olona lwakhiwo luqhelekileyo silubonayo kwiishelufa ezivulekileyo inye okanye zimbini zomgangatho ohamba eludongeni olunye. Nangona oku sele kubonelela ngendlela esebenzayo yokongeza indawo yokugcina kunye nokukhulula umgangatho kunye nendawo yokuphikisa, enye indlela yokwandisa kukusebenzisa iishelufa zekona.
Endaweni yelayini enye ethe tye, jika kwinto yesiqhelo kwaye ujonge ukwenza i-engile elungileyo phakathi kweendonga ezimbini kunye nokusebenzisa indawo yekona. Ayipheleli nje ekubekeni indawo engafunekiyo ukuba isetyenziswe kakuhle, kodwa iphinda iphindwe kabini ukugcina kwakho kwaye yongeza uphawu olongezelelekileyo kwisithuba sakho.
Kunzima ukususa amehlo akho kwindonga eyothusayo njengakwishelufa evulekileyo eboniswe ngasentla. Ukuvula ishelfu ngokulula kunokuguqula ikhitshi lakho libe yindawo emangazayo yendlu. Ukuphambuka kwifom yesiqhelo, ungazama ukufaka iishelufa ezivulekileyo zekona kungekuphela kwinxalenye yodonga kodwa nangaphandle kweekhabhathi ezisisiseko kunye nekhawuntari. Oku kudala ukuqhubeka konke kuyilo.
Iishelufa ezivulekileyo zekona zikwabonelela ngendlela esebenzayo yokusebenzisa isithuba. Endaweni yokuba ichithwe, iikona ezivulekileyo zekhitshi kweli khitshi ziguqula ikona yodonga engacacanga ibe yindawo yokugcina izinto zangokuhlwa.
Ukudibanisa ngaphezulu kweekhabhathi ezingenamnyango kunye neeshelfu ezivulekileyo zekona kukhulisa yonke intshi yendawo ethe nkqo kweli khitshi libuyileyo. Ngokungafaniyo nesithuba sekhabhinethi enezingcango, ikona ezishelifini ezivulekileyo zenza ukuba indawo icace kwaye ibe nomoya ngakumbi.
Loluphi uhlobo lomthi onokulusebenzisa kwiishelufa ezivulekileyo?
Zininzi iintlobo zeenkuni ezinokusetyenziselwa ukwenza iishelufa ezivulekileyo zekhitshi lakho, kodwa ngaphambi kokuba ukhethe uhlobo olululo lwezinto, kufuneka uqale wazi ukuba ziza kusetyenziswa njani iishelufa.
Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa iishelfu ezivulekileyo ukubonisa izihombiso ezincinci kwaye uphathe umthwalo ongasindi, i-aesthetics yeyona nto iphambili ekufuneka uyiqwalasele. Uyilo kunye nombala weenkuni zikwimpawu ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe ekwenzeni iishelufu zokuhombisa. Kwelinye icala, ukuba ucwangcisa ukubeka izinto ezinzima, ezinje ngeembiza neepani, izixhobo zasekhitshini ezincinci, iincwadi zokupheka kunye nesitya sangokuhlwa, eyona nto iphambili ekufuneka ubenayo kufuneka ibe kukuzinza, ukomelela kunye nokuqina. Kuya kufuneka ukhethe uhlobo oluthembekileyo lomthi onokuxhasa umthwalo ixesha elide.
Iishelufu ezivulekileyo zompayini ezenziwe ngomthi zinokuba nomdla ngakumbi xa ulungisa izixhobo ezikwisiboniso sakho kakuhle. Eli khitshi, umzekelo, lisebenzisa iiglasi eziluhlaza kwiishelufa ezivulekileyo zokwazisa umbala wombala kwiphalethi engathathi hlangothi yendawo.
Umthi wompayini - IPine yenye yezona mithi zithambileyo zaziwayo kwintengiso. Imithi ye-Pine i-coniferous, okuthetha ukuba ezi ntlobo zeenkuni zihlala zikhula ngokukhawuleza kwaye zininzi kakhulu, zisenza ukuba zifumaneke ngokubanzi, kube lula ukuzifumana ekuhlaleni kwaye zifikeleleke kakhulu. Nangona kunjalo, ukukhula kwabo ngokukhawuleza kubenza babe ngumthi othambileyo- uhlobo lomthi olungenabuninzi kwaye olomelele kancinci.
Umthi wepayini, ekubeni ungumthi othambileyo, ulungele ukwakha iishelufa ezivulekileyo eziza kusetyenziswa ikakhulu kwiinjongo zokuhombisa kunye nokuthwala imithwalo elula enje ngezixhobo zasekhitshini okanye iziqwenga ezimbalwa zedinala. Kuba incinci kakhulu, inomdla wokugoba ukuba ugcina izinto ezinzima kuyo.
Enye yezona mpawu zibalaseleyo zompayini bubuhle bayo bendalo. Inetoni etyheli emthubi kunye nembonakalo eyahlukileyo enamaqhina eyahlukileyo kuwo nawuphi na umthi. I-Pine kulula ukuyisebenzisa kwaye yenza izinto ezifanelekileyo kakhulu kubaqalayo abafuna ukuzama isandla sabo ekwakheni amashalofu avulekileyo. Kuthatha ipeyinti kakuhle kwaye inyangwa kakuhle ngengubo yokhuni olucacileyo ukuze amaqhina abonakale ngakumbi. Nangona kunjalo, kunzima nokuphucula ngenxa yokuthamba kwayo. Isanding inokubangela amabala asezantsi ngokulula kwaye ichaphazeleka kukrwela kunye neentsimbi xa kuthelekiswa nomthi onzima.
Ukuqinisekisa ukuba iishelfu zakho ezivulekileyo ziya kuhlala ixesha elide, yiya kwimithi yepayini ethe yanyangwa ngoxinzelelo. Ukunyanga iinkuni ngoxinzelelo kuqinisa amandla kwaye kuyinika ukuzinza ngakumbi.
Itsheri - ICherry ithathwa njengolona hlobo luhle kakhulu lwekhitshi ekhitshini, isenza ukuba ibe yinto yokwakha ethembekileyo ethembekileyo kwiishelufa ezivulekileyo. Ubuhle bayo bendalo sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni abaninimzi betsaleleka kuyo. I-Cherry inemibala etyebileyo yendalo, umbala obomvu oshushu, oba mnyama ngakumbi ngexesha. Njengokuba indala kamnandi, umbala weplanga lomthi utshintsha ube ziithoni ezahlukeneyo, ngaloo ndlela unikezela ngeenkangeleko ezahlukeneyo kulo lonke ixesha lokuphila. Ngenxa yombala osisityebi, olu hlobo lomthi lusetyenziswa kakhulu kwizimbo zesiko. Ukongeza, ipateni yayo ecocekileyo yokugaya inokongeza umnxeba wokunethezeka kwisithuba.
Ngaphandle kobuhle bayo bendalo obumangalisayo, itsheri ikwangumbali owomeleleyo kwaye uthembeke ekwenzeni iishelufa. Ngumthi onzima kwaye womelele ngokwemvelo, unzima kwaye uqinile. Iyakwazi ukumelana nokukrwela kwaye ayifuni okanye igobe. Ngenxa yobuhle bayo kunye nokuqina kwayo, i-cherry lukhetho olukhulu lokugcina ishelfu eyenzelwe ukubonisa zombini izixhobo ezilula kunye nezinzima. Iishelufu ezivulekileyo ezenziwe ngomthi wecherry ziqinisekisiwe ukuba azihlali iminyaka kuphela kodwa amashumi eminyaka.
iingoma zokudanisa emtshatweni
Imephu - Olunye uhlobo lweenkuni ezinokusetyenziselwa ukwenza amashalofu avulekileyo yiMaple. Imephu ibonakaliswa ngumbala wayo wokukhanya, ophantse ubukhulu becala umhlophe, kunye neepateni ezintle zokufihla. Kukho iiyantlukwano ezininzi kumbala wale mithi, ukusukela kwabamhlophe abamhlophe bethanda ukuya kumaxesha angaphantsi abomvu abomvu. Amashalofu avulekileyo emephu aphathwa kakuhle ngengubo yento ecacileyo okanye ukugqiba kwendalo njengoko ivumela umbala wayo oqaqambileyo ukuba ubonakale. Inkangeleko yayo egudileyo neyunifom yenza ukuba ibe yinto efanelekileyo kakhulu yokwenza iishelufu ezivulekileyo zokuhombisa.
Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zeenkuni, imephu ibiza kakhulu. Kodwa i-aesthetics kunye nokuqina kuzenzela indleko eziphezulu. Imephu iqinile kwaye inokuthwala umthwalo omkhulu, okuthetha ukuba ungayisebenzisa ukugcina kungekuphela nje ii-knick knick okanye izixhobo kodwa kunye nesidlo sangokuhlwa, iincwadi zokupheka kunye neembiza.Amashalofu avulekileyo emephu afanelekile ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo ekhitshini, ukusuka kwindabuko ukuya kuthi ga ngoku.
Birch - Ebonakaliswe ngombala omnyama kancinci kunemephu, iBirch lolunye uhlobo lomthi olunokusetyenziselwa ukwenza ishelfu kunye neekhabhathi. Inkangeleko yobulumko, iBirch inepateni entle yokugaya kwaye ilungele ukwenza iishelufu ezivulekileyo zokuhombisa. Kodwa ngaphezu kwayo yonke into, umgangatho wayo oxabisekileyo kukukwazi ukuthatha ukugqiba kakuhle. Umthi weBirch unokunyangwa okanye ungcoliswe kuwo nawuphi na umbala, enyanisweni, ungawudlulisa njengohlobo olubiza kakhulu lomthi njenge-cherry okanye imephu ngokusebenzisa umbala ofanelekileyo webala lomthi.
Ukongeza kwizinto ezahlukeneyo kunye noyilo lokuguquguquka, iinkuni ze-birch zihlala zomelele kwaye zinokuma kukonakala nokusetyenziswa kwemihla ngemihla. Ke ngaphandle kokwenza iishelufu ezivulekileyo zokuhombisa, ungayisebenzisa ukwenza iishelufa ezivulekileyo ezinokugcina izinto ezinzima.
Ngokwendleko, i-birch ayibizi kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zeenkuni.
Koa - I-Koa isetyenziswa ngokuxhaphakileyo ekwenzeni izixhobo zomculo ezinemicu efana nokulele, kodwa eyona nto abantu abaninzi abangayaziyo ngayo kukuba yenye yezinto ezinokuthenjwa ezinokusetyenziselwa ukwakha ifanitshala kunye nekhabhathi.
I-Koa lolona hlobo luhle lweenkuni onokuzisebenzisa ukuba ufuna iishelufu zokhuni eziya kuhlala ixesha elide. Ngaphandle kobunzima, iKoa ithathwa njengeyona inzima phakathi kweentlobo zeenkuni ezikhoyo. Ukongeza, olu hlobo lwenkuni lunempawu ezintle ze-shellac, umbala ocacileyo wendalo kunye nolunye lweepateni zohlobo oluthile. Umbala wayo owahlukileyo ngumlinganiso ogqibeleleyo obomvu kunye nomthubi ophantsi, okwenza ukuba ubambe iliso lokwenyani.
I-Koa ikulungele ukwenza zombini ukuhombisa kunye nokulayisha kuthwele iishelfu ezivulekileyo njengoko zombini i-aesthetics kunye namandla zithembekile.
Um-oki - Umthi we-Oak sisiseko kwikhabethe yekhitshi kunye nasekwakhiweni kweshelufu. Olu hlobo lomthi lineentlobo ezimbini ezithandwayo, ezibizwa ngokuba yi-Red Oak ne-White Oak. Ngokubanzi, imithi ye-oki inombala ocacileyo ohluka ukusuka kumhlophe ukuya kubomvu, iithoni ezipinki. Ngenxa yobukho bezimbiwa ezifakwe emthini, umbala wayo wendalo unokubandakanya ukugcoba okumthubi, okuluhlaza nokumnyama ngamanye amaxesha.
I-oki ebomvu luhlobo lomthi wom-okhi olunendawo ephantsi ebomvu ukuba bomvu kwaye imthubi.Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo ze-oki, ipateni yayo yegraining iyabonakala ngakumbi. Ukongeza kubuhle bayo, i-oki ebomvu yaziwa nangokomelela kwayo, ukuzinza kwayo kunye namandla ayo. Nangona kunjalo, yintoni eyenza ukuba ibe yenye yezona ntlobo zeenkuni ezifanelekileyo ezishelifini kulula ukusebenza nazo. Kwanabaqalayo kulwakhiwo lweishelufa baya kuba nobunzima obuncinci ekuphatheni, ekusikeni, ekuhlanganiseni nasekugqibeni olu hlobo lwenkuni. I-oki ebomvu nayo ayibizi kakhulu xa kuthelekiswa neminye imithi.
Um-oki omhlophe Kwelinye icala, ibonakaliswa yipateni ecekeceke ngakumbi yegraining kunye nombala wegolide ngakumbi. Xa kuthelekiswa ne-oki ebomvu, i-White Oak yomelele kwaye yomelele ngakumbi. Ngenxa yokufudumala kwayo okufudumeleyo, i-White Oak yenza izinto ezifanelekileyo zokwenza iishelfu ezivulekileyo zendlela zasekhitshini zemveli, ngakumbi iikhitshi zesitayile soMsebenzi.
Padauk - IPadauk okanye iPadauk yaseAfrika ayithandwa kakhulu xa ithelekiswa ne-Oak, Walnut, Cherry okanye Maple, kodwa ayenzi ukuba ithembeke kancinci. Olu hlobo lomthi luthathwa njengonqabileyo kwaye luxabisekile ngombala obomvu o-orenji omangalisayo. Ngenxa yombala wayo, abanye babhekisa kwiPadauk njengeVermillion.
Inkuni yePadauk yomelele kakhulu, yomelele kwaye inokumelana nokubola. Kukwanyanzeleka ukuba ikwazi ukuxhathisa iintsholongwane kwaye ayinako ukubakho kwizinambuzane. Ngokubanzi, umthi wePadauk uyindlela yokusebenza kunye kwaye unokucheba, uncanyathiselwe okanye ugqitywe ngaphandle kobunzima, uyenze ibe yinto efanelekileyo kubaqalayo abafuna ukuzama ithamsanqa labo ekwakheni amashalofu avulekileyo ekhaya.
Olu hlobo lweenkuni lunokusetyenziselwa ukwenza iishelufa ezivulekileyo zokusetwa ngokusesikweni okanye ngokwesiko, kodwa inokuthi ilingane ngaphandle komthungo kuyilo lwanamhlanje nolwanamhlanje.
Walnut - I-Walnut nayo yenza ukuba kuluhlu lweemithi ezifanelekileyo zokuzisebenzisa ukwenza iishelufa ezivulekileyo ikakhulu ngenxa yokuzinza nokungaphelelwa lixesha. Njengomthi weCherry, i-walnut nayo ihamba kakuhle. Ukusuka kumbala omdaka othulisiweyo, i-hue ye-walnut wood iguquka ibe ngumthunzi othobekileyo womhlaba. Inepateni entle, ethe nkqo, ethe nkqo eyenziwe ngombala omdaka ngombala obomvu ongwevu ukuya kwimingxunya yetshokholethi enzulu. Sisixhobo esifanelekileyo esishelufini ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo, nokuba yeyesiko, yotshintsho, yanamhlanje okanye yanamhlanje.
Ngokumalunga nokuthembeka, iinkuni zomthi ziyomelela, zomelele kwaye zomelele. Ayizukugoba ngokulula kwaye inokusetyenziselwa iishelfu ezivulekileyo eziza kubonisa kwaye zigcine izinto ezinzima.
I-Plywood okanye i-Plyboard- Kulabo basebenza ngohlahlo-lwabiwo mali olunomda, enye yeendlela ezizezinye zomthi oqinileyo yiplywood. I-Plywood yinto eqhelekileyo esetyenziselwa iishelufa ezivulekileyo esele zilungile onokuzifumana kwiivenkile zokuphucula ikhaya. Iplanga luhlobo lwebhodi eyenziwe ngomthi equlathe i-two okanye ngaphezulu kwamacwecwe amancinci emithi ancanyathiselwe kwaye acinezelwa kunye kwicala lokutshintsha okuziinkozo. Ihlala ithengiswa njengamashiti kwaye iza ngobukhulu obuqhelekileyo ziine ngeenyawo ezisibhozo. Ngamaplangaiyafumaneka kumabanga ahlukeneyo amisela ukuguda kunye nobukhulu bezinto.
I-Plywood yinto efanelekileyo yokwenza izinto ezishelifini kuba kulula ukusebenza nazo. Esinye isizathu sokuba olu hlobo lweenkuni lulungele ukugcinwa kwamaplanga luyafumaneka kwaye alubizi kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zeenkuni. Nangona ingabizi ngaphezu komthi oqinileyo, iplanga lomelele kwaye lomelele.
Icala elisezantsi kuphela ekusebenziseni iplywood ngamashalofu avulekileyo kukubonakala kwayo. Ngokungafaniyo nomthi oqinileyo, iplywood ayinamaqhina ngaphezulu. Nangona kunjalo, inokunyangwa ngokugqitywa okwahlukileyo njengamabala emithi, ivanishi, i-lacquer okanye ipeyinti ukuyenza ibonakale ngakumbi kwaye inomdla.
Amashalofu avulekileyo ekhitshini, olona hlobo lweplywood olisebenzisayo yifenitshala yeplywood yefenitshala. Khetha iibhodi ezi-¾ ukuya kwi-intshi enye ubukhulu. I-plywood yamanxweme okanye i-plywood yebakala laselwandle nayo iyona ndlela efanelekileyo yokusebenzisa kuba ngokungafani ne-plyboard yesiqhelo, oku kwahluka kuneziphene ezimbalwa njengoko zenziwe ngobuso obuqinileyo kunye ne-veneers engundoqo. I-plywood yaselwandle isebenza ngcono kwiimeko ezimanzi kunye nokufuma kwaye iyachasana nefungi ngcono.
Iishelufu ezivulekileyo zomthi zizisa ubushushu kunye noxolo kwindawo. Ukukhetha izixhobo zomthi zokuncedisa ukugqitywa kweeshelufu ezivulekileyo kuthatha uyilo ngokubanzi kunye nobushushu beli sithuba phezulu inotshi eyongezelelweyo. Izixhobo zomthi eziboniswe kwizishelufu ezivulekileyo ezenziwe ngomthi ziguqula oku kugcina kube ludonga oluhle kakhulu.
Amashalofu avulekileyo anokunceda ekuthinteleni ikhitshi lakho lingakhange lixakeke kwaye likhulule nendawo yokubala. Eli khitshi limnandi linendawo eninzi yokusebenza, enkosi kwiishelufa ezivulekileyo ngaphezulu.
Ukuba unekhitshi elincinci, ungaligcini ngekhabhathi epheleleyo njengoko inokwenza indawo ibonakale inzima. Endaweni yoko, khetha umsebenzi weeshelfu ovulekileyo ukuze ugcine i-dinnerware.
Ukuba unekhitshi elincinci kwaye ujongene nendawo enomgangatho omiselweyo, indlela esebenzayo yokuphinda kabini ukugcina kwakho kukusebenzisa iishelfu ezivulekileyo. Iishelufu ezivulekileyo zikuvumela ukuba uthathe ithuba lesithuba sodonga, ukhulule umgangatho wakho kunye nekhawuntari yakho ukuze ube nendawo engaphezulu yokusebenza kuyo.
Kwikhitshi elincinci elivulekileyo lokugcina ishelfu, ungazama ngaphezulu kwamacala amabini eshelufu evulekileyo ukwandisa ikhaya lakho. Ukuba ubeko lwekhitshi lakho livumela, ungakhetha kwakhona umgangatho ukuya kwisilingi iishelfu ezivulekileyo.
Iishelufu ezivulekileyo zikwabonelela ngendlela esebenzayo yokudala inkohliso yendawo enkulu ekhitshini elincinci. Endaweni yokubeka isithuba sokugcinwa kwentloko evaliweyo ngaphezulu kwekhawuntari yakho yasekhitshini, faka ezinye iishelfu ezivulekileyo. Kuyamangalisa indlela iishelfu ezivulekileyo ezinokugcina ngayo isithuba sokuziva ungazivalelene ngaphakathi. Funda ngakumbi malunga uhlela njani ikhitshi elincinci Apha.
Kwiikhitshi ezincinci, ukugqiba iishelfu ezivulekileyo ezinombala ofanayo nayo yonke ikhabhathi kunye neendonga nazo ziya kwenza ukuba indawo ibonakale inkulu. I-dinnerware emhlophe nekhanyayo kunye ne-glassware nazo zezona ntlobo zezincedisi ziboniswa kwiishelufa ezivulekileyo kumakhitshi amancinci kuba zibonisa ukukhanya kwaye zenza igumbi likhanye.
Izikhala ezingathandekiyo, ezinje ngecala lefestile, zinokusebenza ngokusetyenziswa kweeshelufa ezivulekileyo. Eli khitshi langoku lisebenzisa iishelufu ezivulekileyo ezenziwe ngomthi ezineentsimbi ezimnyama ezingqamana kamnandi nezinye izixhobo zekhabinethi kunye nefenitshala yesitayile seshishini.
Ukuba unodonga lwendlela yangaphantsi yethayile egxininisayo ekhitshini lakho elincinci, ungayifihli emva kwesithuba esipheleleyo seekhabhathi zodonga. Endaweni yoko, yibonise kwaye uyenze indawo ekugxilwe kuyo yendawo eneshelfu evulekileyo.
Izinto zokubala ezingenazintsimbi zinotyekelo lokwenza iikhitshi zibukeke zorhwebo kunye nemizi-mveliso, kodwa enye yezona ndlela zilula nezona zibalulekileyo zokwenza ukuba zibonakale ngathi zifana nekhaya kukubeka iishelufa ezivulekileyo ngaphezulu kwazo. Ungawaguqula amashalofu evulekile abe yindawo yokubeka iziqholo usebenzisa iingqayi zeglasi kunye neebhotile ezinamaxesha ahlukeneyo.
Endaweni yokushiya udonga lwakho lwe-aksenti njengoko injalo, yenze ibe yinto esebenzayo ngakumbi ekhitshini lakho ngokudibanisa iishelfu ezivulekileyo kuyilo. Eli khitshi lincinci lineeshelfu ezivulwe ngomthi ezihambelana nebhodi yethayile yokutshiza.
Iishelufa ezivulekileyo zigcinwa kwaye zihonjiswe zonke kwinto enye. Unokwenza izinto ozibekayo kuzo, kwaye akusoloko kufuneka ube zizitya zakho ozithandayo kunye nesidlo sangokuhlwa esibonakalayo. Kolu loyilo luvulekileyo lokugcina amashalofu, iicampbell zeesuphu zeCampbell zisebenza njengowona mhlobiso uphambili- ukujikajika okungalindelekanga kunye nokusika kwindawo efanelekileyo.
Endaweni yeshelfu yesiqhelo evulekileyo eyenziwe ngomthi, khetha iiracks zentsimbi ukongeza glam ekhitshini lakho. Ukugcinwa kwensimbi, njengaleyo iboniswe ngasentla, ngumdlalo ofanelekileyo kwizixhobo zensimbi ezingenasici, izixhobo zekhompyutha kunye nezinto ezilungiselelwe zona.
Iifama zasekhitshini zasekhaya bayathandwa ngokulula, umtsalane kunye nesibheno esisezantsi ekhaya abaziprojekthi. Ngaphandle kokuba yenye yezona ndlela zilula kunye nezona ziluncedo kakhulu zoyilo ekhitshini, isitayile sendlu yasefama ikhupha imvakalelo efudumeleyo neyamkelekileyo engafaniyo nenye.
Ukuyilwa koyilo lweekhabhathi zesitayile sendlu yefama kukuthuthuzela kwelizwe. Izinto zoyilo zolu hlobo loyilo lwekhitshi zilawulwa ziimpawu ezahlukileyo ezinje ngokuziva usezantsi ekhaya, uyilo olungathobekiyo nolungqalileyo, ukusebenza kunye nesibheno esomeleleyo se-rustic okanye se-homepun.
Ngokwesiqhelo, iikhabhathi zesitayile sendlu yasefama zisebenzisa izinto zendalo ezinje ngomthi, njengoko zijolise ekuziseni ngaphandle. Xa usenza iifama zasekhitshini zivulekile amashalofu, kufanelekile ukuba unamathele kumgangatho onzima onzima njengecherry, imaple kunye ne-oki. Umthi wepayini yenye yezinto ezifanelekileyo kwindlu yasekhitshini evulekileyo ezishelifini kuba ukubonakala kwayo kunxibelelene nobuhle basekhaya bale ndlela yasekhitshini. Ngenye indlela, iinkuni ezibuyisiweyo zinokusetyenziselwa ukwenza isibheno esihlala ngakumbi okanye isibheno sexesha elifanelekileyo.
Ngokuphathelene nesitayile sendlu yasekhitshini evulekileyo ezishelifini, izinto ezenziwe ngombala ezenziwe ngezinto ezixubileyo ezifana nokufakwa kweglasi, izinto zokubuyisa ezenziwe ngomthi okanye izinto ezinenjongo ezicwangcisiweyo zilungile. Ungayisebenzisa kwakhona ukugcina iipleyiti ezimhlophe, izitya zedinala okanye iingqayi zeglasi kunye neebhotile njengoko oku kulingana nombala wotyikityo wombala weekhitshi zendlu yasefama elawulwa yimibala emhlophe nokukhanya.
Ukudlala ngamanqanaba aphezulu kunye nolwakhiwo lweeshelfu ezivulekileyo kwenza ukuba le tile yasendleleni yaseklasikhi ebuyela umva ime ngakumbi kwisithuba.
Ukuqina kweeshelfu ezivaliweyo ezenziwe ngomthi zibonisa umtsalane onokuchasana kunye nesibheno esezantsi ekhaya sale khitshi yesitayile sendlu.
Igama elithi rustic lihlala linxulunyaniswa namagama arhabaxa, ixesha elifanelekileyo kunye nokushushu. Xa kuziwa kwizitayile zekhitshi, uyilo lwe-rustic lwaziwa kakhulu ngokuhla kwalo emhlabeni, ngobuhle beminyaka ubudala, isibheno esifudumeleyo nesikhululekileyo. Inobushushu obufudumeleyo nobufudumeleyo obuphantse bafana nesimbo selizwe, kodwa umahluko phakathi kwezi zimbini kukuba eyokuqala ayichazwanga.
Enye yezona zinto zibalaseleyo kwiikhitshi zesitayile sayoImimangaliso yendalo yekhitshi yendalo yekhitshi.Izinto zoyilo zolu hlobo loyilo lwekhitshi zilawulwa ziimpawu ezahlukileyo ezinje ngobuhle oburhabaxa, inkangeleko yendalo, uburhabaxa bokurhabaxa kunye nembonakalo eluhlaza kunye ne-weather.
Xa kuziwa ekwakheni iishelufu zekhitshi ezivulekileyo, ezona zinto zisetyenziswayo zizinto zomthi onamaqhina kunye nentliziyo yomthi. Umthi onzima oqinileyo kunye neepateni ezibonakalayo zokuhombisa ezifana ne-cherry okanye ama-knotty softwoods anjenge-pine alulungele kakhulu olu hlobo lwamashalofu avulekileyo. Ungasebenzisa ibala elicacileyo njengokugqiba ukuqaqambisa iinkuni zomthi, kodwa kungenjalo, inokunyangwa ngepeyinti ejijekileyo okanye ephelelweyo yokunika iishelufa zakho ubuhle oburhabaxa. Nangona kunjalo, ukuba ufuna inkangeleko eluhlaza ngakumbi, ungayishiya inganyangwa okanye ingagqitywanga.
Ezinye izinto ezongezelelekileyo zoyilo ezinokuthi zibandakanywe kwiishelufa zekhitshi ezivulekileyo yimifanekiso eqingqiweyo. Kodwa qaphela ukuba enye yeempawu ezibalaseleyo zeekhitshi ze-rustic kukuba ayisihombisi kakhulu. Iinkcukacha ezincinci zokuhombisa zinokukrolwa kumqolo wokhuni ukunika nje iishelfu zakho ezivulekileyo uphawu olwenziweyo.
Xa kuziwa kwisitayile, ezinye zezona zinto zibalaseleyo zokuboniswa kwishelufu yekhitshi evulekileyo yezixhobo zezixhobo zokuvuna okanye zokuhombisa ngesibheno esidlulileyo. Ukuba ucwangcisa ukubonisa i-dinnerware okanye izixhobo zekhitshi, bambelela kumbala ofudumeleyo ombala olawulwa zizityebi zemibala emdaka kunye nemibala yomhlaba ezinje ngobomvu obunzulu, imifuno kunye nephuzi.
Ihempe zabatshati zetheko le-bachelorette
Indawo evulekileyo engwevu enee-bracket ezinobungakanani bongeze kwimfudumalo kunye ne-vibe ekhululekile yale khitshi ye-rustic. Isiqithi sekhitshi esivulekileyo, somthi esiphekwe eluhlaza sisebenza njengendawo ephambili yendawo.
Amanqwanqwa amaplanga aqingqiweyo aneebakaki zentsimbi zisebenza zombini njengokugcina kunye nokuhombisa kule khitshi yesitayile. Izimbiza zeglasi ezinelebhile, ezinje ngezo ziboniswe apha ngasentla, zizinto ezifanelekileyo kwesi simbo kuba zinokunika indawo indawo efana neyasekhaya kwaye zihlala kwisibheno.
Iikhitshi ezixhomekeke kwinto yanamhlanje kunye nexesha langoku zihlala zisebenzisa umbala omnyama kwiphalethi yazo iyonke. Olu lukhetho oludumileyo phakathi kwabanini bamakhaya abafuna iikhitshi zesitayile seshishini, iikhitshi zenkulungwane ephakathi okanye ezona khitshi zincinci zincinci.
Nangona ingakhazimli kwaye inomoya njengekhitshi elimhlophe, iikhitshi ezimnyama zibonelela ngemvelaphi yokungathathi hlangothi ekuvumela ukuba ungenise eminye imibala kwisikimu. Ikhabhathi emnyama, ngakumbi, izibini ezintle ngeendonga ezinemibala ekhanyayo, imiphezulu yeetafile engathathi hlangothi, umgangatho, iindonga, kunye nezixhobo zentsimbi engenasici. Olu seto lwekhitshi lukwanika ithuba elifanelekileyo lokwazisa umahluko ukuze wongeze ubunzulu kunye nobukhulu kwisithuba sakho.
Ukuba unekhitshi elimnyama, ezishelufa zivulekileyo onokuzisebenzisa ziishelufu zokhuni kwibala okanye isiphelo sendalo, okanye iishelfu ezimhlophe- ngokusisiseko nantoni na eya kwahluka ngombala omnyama, ocebileyo omnyama. Unako ukugcwalisa amashalofu amnyama ekhitshini amnyama ngesixhobo esenziwe ngentsimbi kunye neebakaki zenkxaso ukuze usinike ngakumbi isimilo. Xa kuziwa kwisitayile, khetha izinto ezimhlophe okanye ezikhanyayo ezinemibala ukubonisa iishelfu ezivulekileyo njengoko zinokwenza igumbi likhanye ngakumbi. Iiglasi okanye nantoni na eyenziweyo ngeglasi nayo zizinto ezifanelekileyo zokuboniswa kwiishelufa zasekhitshini ezimnyama kuba zibonelela ngekhefu elibonakalayo kwinkangeleko yendawo.
Sebenzisa ishelufu yakho evulekileyo yokwazisa umbala omtsha kwisikim sekhitshi lakho elimnyama, Eli khitshi limnyama nelomhlophe langoku lifumana isandi esishushu sasemhlabeni ngokusetyenziswa kweeshelufu ezivulwe ngomthi.
Uninzi lwezindlu ezineendawo ezinqongopheleyo zisebenzisa ikhitshi lokuhamba ngegalari. Ikhitshi lokuhamba ngegalali, ngokwenkcazo yindawo emiselweyo ekhitshini ende kwaye imxinwa kwaye ineekhabhathi ezisisiseko, iikhabhathi zodonga kunye neekhawuntari ezikumacala omabini endlela yokuhamba. Ngamanye amagama, iikhawuntari zayo ezimbini zekhitshi ezihamba ngokuhambelana. Olu hlobo lwekhitshi alwaziwa kuphela ngokuba lisebenza ngokufanelekileyo kwaye lusebenza ngokuthelekiswa nolunye ulungiselelo lwekhitshi, kodwa kwanokupakisha kwiindawo ezininzi zokugcina kwindawo encinci yendawo.
Ukuvula ishelfu kusebenza kakuhle kwiikhitshi ze-galley kuba zenza ukuhamba komsebenzi kwendawo kusebenze ngakumbi. Ngokugcina izinto zibonakala kakhulu, isidingo sokudlula kwikhabhathi nganye ukufumana into oyifunayo ngelixa usebenza iyasuswa.
Kuzo zonke iintlobo zamacwecwe ekhitshi, ikhitshi eline-galley linolona tyekelo lukhulu lokuziva ngathi luyi-claustrophobic kuba luhlobo lwekhorido ende phakathi kweendawo ezimbini zokubala kunye neeyunithi zokugcina. Ukuvula ishelfu ngokuvulekileyo kunokwenza iikhitshi ze-galley ziziva zivalwe kancinci ngaphakathi kwaye zinokwenza indawo icace gca, xa kuthelekiswa nokubeka iikhabhathi ezingaphezulu ezivaliweyo kwiindonga zombini.
Ikhitshi elibonisa igali ngokulula linokubonakala licineke kakhulu ukuba lizaliswe ngekhabhathi ephezulu. Ukugcina umphezulu uvulekile, ngokusebenzisa ishelfu kunokuyinika i-vibe entsha, kwaye kuyenze ikhanyise kakuhle kwaye ingene umoya.
Xa kufikwa ekufikeleleni kwishelufa evulekileyo kwiikhitshi ze-galley, kufanelekile ukugcina izinto zincinci ukuze zibukeke zicocekile, zicocekile kwaye ziqaqambile.
Isiqithi sekhitshi sisebenza ngokungathandabuzekiyo, kodwa ungabandisa ubuninzi baso ngokudibanisa ezinye iishelfu ezivulekileyo kuso. Ayivulelanga nje kuphela iishelfu eziguqula isiqithi sekhitshi sibe yindawo enomtsalane ekhayeni, kodwa ikwabonelela ngendlela ehleliweyo yokugcina izinto ezininzi, njengempahla yasekhitshini, iincwadi, izinto zokuhombisa, izixhobo zombane ezincinci- phantse nantoni na onokucinga ngayo.
Ukuvulwa kwishelufa kokona kulungileyo kukhutshelwe kwizinto ezongezelelweyo ezinkulu nakwizixhobo zombane kuba zilungelelanisa inkangeleko yendawo. Eli khitshi lihlaziyayo lisebenzisa ukusetyenziswa kweeshelfu evulekileyo ecaleni kwefriji enkulu yentsimbi engenasici, isenza indawo ingabi nzulu ukuba ijongeke.
Ishelfu evulekileyo ibonelela ngendawo efanelekileyo yokubonisa iimagi ezithandekayo. Endaweni yokuyibeka kwimiqolo, ungazama nokuzixhoma kwirack yesinyithi, njengale isetyenziswe apha ngasentla.
Ukubeka ishelfu evulekileyo kwiindawo ezingalindelekanga, njengokuphela kwesiqithi sekhitshi, kunokuzisa isibheno ngakumbi kwindawo. Eli khitshi linobunkunkqele likhangeleka linodidi olucokisekileyo ngemifanekiso eqingqiweyo yeglasi kunye nezityalo ezenziwe ngebhotile eziboniswe kwiishelufa ezivulekileyo zaselwandle.
Sebenzisa ishelfu evulekileyo kwisiqithi sekhitshi kunokubangela ukuba kubekho ikhefu elibonakalayo ekhitshini elikhulu eligcwele ikhabhinethi eninzi. Ukwenza ubunzulu kunye nobukhulu kwisithuba, zama ukugqiba isiqithi ngombala owahlukileyo.
Vula ishelufu kwiziqithi ezinde zekhitshi, ezinje ngezo ziboniswe apha ngasentla, zibonelela ngokuguquguquka okuphezulu kunye nokuguquguquka kuba zinokusetyenziselwa ukugcina izinto ezinde ezinje ngeetrayi zokubhaka okanye izinto ezinkulu ezinjengeembiza neepani. Bona Okuninzi iintlobo zeziqithi zasekhitshini Apha.
Enye into ekhulayo kwimizi-mveliso yoyilo lwekhitshi kukusebenzisa iikhabhathi ezingenamnyango. Ngokusisiseko ezi zinokuthathwa njengezishelufu ezivulekileyo nazo, kodwa endaweni yokugcina iziphelo zivulekile, kukho imida ejikeleze.
Ukukhetha iikhabhathi zasekhitshini ngaphandle kweengcango endaweni yeekhabhathi eziqhelekileyo ezivaliweyo kunika indawo ebanzi ngakumbi, yomoya kunye nevulekile ekhitshini. Iikhabhathi ezingaphantsi komnyango zisetyenziselwa ezona nkqubo zingcono zokugcina ngaphezulu. Iikhabhathi ezisisiseko zisebenza ngokugudileyo njengoko zisebenza njengendawo yokubala okanye indawo yokusebenza, kwaye kuyacetyiswa ukuba zibe neengcango kuba zikufuphi emgangathweni kwaye izinto ezigcinwe kuzo zithande ukungcola xa kuthelekiswa nezo zigcinwe phezulu udonga. Kwelinye icala, iikhabhathi zodonga okanye iikhabhathi ezingaphezulu, zinokwenza ngaphandle kweengcango
Iikhabhathi ezivaliweyo zodonga zizisa iindonga zegumbi ngaphambili, ke zinotyekelo lokwenza ikhitshi liziva lincinci. Kodwa ngokuphelisa ucango, unokwenza ngokubonakalayo ukuba ikhitshi lakho libukeke likhazimla kwaye uzive uncinci.
Ukuba ucwangcisa ukufaka iikhabhathi zasekhitshini ngaphandle kweminyango kuyilo lwasekhaya, unokuguqula iikhabhathi ezikhoyo ngokususa iingcango kunye nokusebenzisa isidumbu. Qiniseka nje ukuba usebenzisa iikhabhathi ezigqityiweyo ngaphakathi.
Umnyango ongaphantsi kweekhabhathi zekhitshini zilungile njengokugcina ngaphezulu kwiikhitshi ezinombala omnyama kuba zithintela indawo ekujongeni ukuba buthuntu. Iingqayi zamasoni kunye nesidlo sangokuhlwa esiboniswe emnyango kwiikhabhathi ezingaphantsi kunika le khitshi ukukhanya kunye nokubeka ngakumbi i-vibe.
Ngokucacileyo awukho umthetho onzima kwinto onokuyibeka eshalofini evulekileyo. Inika ukusebenza ngokuchaseneyo okuphezulu kwaye ungayisebenzisa nangayiphi na indlela oyifunayo noyifunayo. Nangona kunjalo, ukuthintela umxube olungileyo wezinto oza kuzigcina kunye nokugcina kwiishelufa ezivulekileyo kunokunceda ekuphuculeni kungekuphela nje kubuhle bayo kodwa nakumsebenzi wayo.
Apha ngezantsi, sikunika iingcebiso malunga nendlela onokuthi wandise ngayo ukusebenza kunye nomtsalane kwiishelufa zethu ezivulekileyo.
Nazi ezinye iingcebiso kunye nemibono yokuba ungazenza njani ishelufu yekhitshi evulekileyo:
Jonga izikimu ezahlukeneyo zomboniso wakho. Enye yeendlela ezilungileyo zokwenza ukuba iishelufu ezivulekileyo ekhitshini zibonakale zinomdla ngokulandela isikimu esithile sombala wezinto kunye nezinto oceba ukuzibonisa. Uyilo olupheleleyo lwekhitshi lakho liza kujongeka libumbene ngakumbi ukuba ishelufu yakho evulekileyo eboniswayo iyadityaniswa nayo yonke indawo yombala wendawo.
Ukuba ukhetha ukujongwa okungaphezulu okanye okuthintelweyo, khetha izixhobo, iipleyiti kunye nezinye izinto ezinombala othulisiweyo okanye umbala omthubi. Olunye ukhetho kukunamathela kwiklasikhi yonke imhlophe bonisa ngokudibanisa umahluko phakathi kwabamhlophe kunye nemibala emhlophe. Ukugcina yonke imiboniso emhlophe yeyona ndlela ilula yokwenza ukuba izinto ezahlukeneyo zibonakale zingaxinananga. Kuhlala kuyimbono ephosakeleyo yokuba into emhlophe yonke inokubonakala ikruqula, kodwa enyanisweni, ayinasiphelo. Ungasusa ngokulula olu cwangciso lombala kwiishelufa ezivulekileyo ngokongeza ukubamba kweglasi kwizinto.
Ngokuchaseneyo, ishelufu evulekileyo yenye yeendlela ezilungileyo zokongeza umbala kuyo yonke ikhitshi elimhlophe. Ukuba ufumanisa ukuba umbala wakho uyathandeka kwaye uyathandeka, unokongeza imibala yombala ngokubandakanya iiseramics ngeendlela ezahlukeneyo okanye izinto zokugcina ikhitshi elimhlophe linomdla ngakumbi. Amashalofu avulekileyo anikezela ngeendlela ezahlukeneyo kwaye inokuba yindawo elungileyo yokwazisa ngedinala ezimibalabala, izitya, iiggs kunye nezinye izixhobo.
Ukuba awuyondawo yomboniso omhlophe kwaye ufuna umbala ongaphezulu, kungcono ukugcina ifayile ye- Iphalethi yombala elula . Imibala emithathu yanele njengoko ukhetha ukuhamba nangaphezulu kunokwenza ukuba ishelufu yakho evulekileyo ibonakale ijonge kakhulu. Ungadlala ujikeleze ngombala wombala omncinci kunye nokongeza imibala eyahlukeneyo kunye nezixhobo. Ukuba ucwangcisa ukuquka imibala emnyama kumboniso wakho, musa ukulungelelanisa izinto ngokuthe tye kodwa endaweni yoko usasaze konke ukwenza ubume obulungeleleneyo.
Dlala ngeendawo eziphakamileyo. Dlala ngamalungiselelo akho ngokudibanisa izinto ezahlukeneyo ezinje ngevasi ende, ingqokelela yamacwecwe okanye iincwadi okanye izinto ezincedisayo ezincinci ukwenza ukubonakala okunamandla ngakumbi.
Hlanganisa imibala. Khetha izinto ezineemathiriyeli ezahlukeneyo kunye noburhabaxa obufana neseramikhi, iglasi, isinyithi njengoko igcina ukubonakala kwayo kunomdla ngakumbi. Ukuchaphazeleka kwentsimbi ngamanye amaxesha kunokudityaniswa neeseramikhi ukuze ujonge ngakumbi.
Namathela kwizixhobo zeglasi ezicacileyo ukuba ufuna ukwenza ikhitshi lakho libonakale liqaqambile. Khetha izixhobo zeglasi ezibonakalayo nezicacileyo kwiishelufa ezivulekileyo ukuba ufuna ukwenza indawo ibonakale ikhanya ngakumbi. Khumbula, iglasi ibonisa ukukhanya.
Hlanganisa iziqwenga ezisebenzayo nezokuhombisa. Ukudibanisa izinto ezahlukeneyo kunye ne-eclectic kongeza umdla obonakalayo kwishelfu evulekileyo. Izinto ezenziwayo ezinje ngeepleyiti, isidlo sangokuhlwa, izitya, iimbiza kunye nezinto zeglasi zinokudityaniswa nezinto zokuhombisa ezinje ngezinto ezinesakhelo, iivazi okanye izityalo. Kwi-additrion, umsebenzi wobugcisa ungabonakaliswa kwiishelufa ezivulekileyo.
Sebenzisa izityalo zangaphakathi ukwenza ikhitshi lakho libukeke lihlaziya ngakumbi. Ukubonisa izityalo zangaphakathi ekhitshini ezishelifini ezivulekileyo kunokwenza ukuba ikhaya lakho lizive lihle ngakumbi, linekhaya kwaye kwangaxeshanye lihlaziya.
Ngamanye amaxesha iziqulatho kunye nezixhobo, hayi iishelfu, ezithi ziqwalaselwe. Kule khitshi yelizwe enesitayile, isitya sedinala esimnandi kunye nezinto ezithandekayo eziboniswe kwiishelufa ezivulekileyo, zisebenza njengendawo ekugxilwe kuyo yesithuba.
Nazi ezinye iingcebiso ezifanelekileyo malunga nendlela onokucwangcisa ngayo iishelufa ezivulekileyo ekhitshini:
Gqamisa iishelufa ezivulekileyo usebenzisa izibane. Ukusetyenziswa kwezibane yeyona ndlela yokubeka ugxininiso kwishelufu evulekileyo. Kuyamangalisa ukuba isixhobo esincinci sokukhanyisa sinokunika ifuthe elikhulu kwinto engabonakaliyo yesithuba. Zama ukubeka izibane zesikhombisi okanye iskonce ngaphezulu kweshelufu yakho evulekileyo ukuze ubeke izibane zokukhanya kuso.
Hlanganisa amashalofu avulekileyo okanye iiplanga kunye neekhabhinethi. Akunyanzelekanga ukuba ubeke amashalofu avulekileyo kuyo yonke indawo . Iingcali zithi ezona nkqubo zigciniweyo zixubene nekhabhathi ezivaliweyo, iishelfu ezivulekileyo kunye namanqwanqwa. Ikhitshi yenye yeendlela ezilungileyo zokwazisa lo mgaqo woyilo. Ukubeka iishelfu ezimbini ezivulekileyo ecaleni okanye ngaphezulu kweekhabhathi zekhitshi yeyona ndlela ifanelekileyo yokuphelisa imvakalelo evaliweyo yeekhabhathi kwaye kunceda ukuvula igumbi ngokubonakalayo.
Gcina ezo zinto zemihla ngemihla zifikeleleka ngokuzibeka kwiishelufa ezivulekileyo. Ukugcina izinto ezibalulekileyo zifikeleleka ngokulula kuphucula ukuhamba komsebenzi kunye nokusebenza kwenkqubo yokugcina ekhitshini lakho. Ishelfu evulekileyo inceda ukugcina izinto ezininzi ezisetyenzisiweyo kungekuphela nje kufutshane kodwa ikwenze kubonakale kakhulu kungekuphela kubanini bamakhaya kodwa nakwiindwendwe ngamanye amaxesha. Inciphisa isidingo sokuhamba kwiikhabhathi kwaye ikhuphe izinto ngaphambi kokuba ufumane eyona nto uyifunayo.
Shiya ezinye iishelufa zakho zivulekile zingenanto. Akusoloko kufuneka ugcwalise ishelufu evulekileyo ngezinto ezininzi, ngamanye amaxesha, ukuyishiya ivulekile kwanele. Ukucoca ishelufu evulekileyo kunye neshelufu engenanto kunika indawo yakho yokugcina indawo ukubukeka okungaphezulu kwaye kungacwangciswanga. Kuyamangalisa ukuba yonke indawo izive ilungile kwaye icocekile.
Amashalofu avulekileyo ekhitshini anokusetyenziselwa encinci phantse nantoni na - ukusuka kwizixhobo zokuhombisa kunye neeknick knacks ukuya kwizicucu ezisebenzayo ezinje ngezixhobo ezincinci. Kodwa zeziphi ezona zinto zibalaseleyo onokuzibeka kuzo ukuze wandise ukusebenza kwazo.
Kumfanekiso ongentla likhitshi elinombala omnyama. Amakhitshi amnyama afana nalawo anamalahle kunye nezimvi, anokuzuza ngcono kwiishelufa ezivulekileyo. I-dinnerware emhlophe kunye nee-mugs ezibonisiweyo ngumahluko ohlaziyayo kwikhabhathi emnyama.
Uluhlu lwezona zinto zibalaseleyo zokubeka kwiishelufa zasekhitshini ezivuliweyo:
Iimfuno zemihla ngemihla
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ishelufu evulekileyo yeyona ndawo yokugcina izinto zemihla ngemihla njengoko inikezela ngokufikelela ngokulula kwaye igcina ikwindawo yokufikelela. Izinto ezifuneka mihla le ezifana neepleyiti, iiggs, izitya kunye neiglasi zezinye zezinto ezisetyenziswa kakhulu ekhitshini, kwaye ukuba zikwiishelufa ezivulekileyo, zibonakala kakhulu kwaye oku kunceda ukunciphisa isidingo sokukhangela kwikhabhinethi nganye malunga nezinto ozifunayo. Ngokwenyani, ikhawulezisa indlela yakho yesiqhelo kancinane kwaye yenza ukuba kube lula nakwiindwendwe ukuba zithathe iglasi okanye ikomityi yekofu xa ziyifuna.
Indlela enobuchule yokubeka ishelufu kwindawo elungileyo kukusiguqula sibe yindawo yokubeka ikofu. Cwangcisa iikomityi zekofu, iitispuni, izinto ezinje ngeembotyi zekofu, iswekile nayo yonke into oyifunayo ukwenza ikomityi yekofu efanelekileyo. Unokubandakanya umenzi wekofu okanye umshicileli wekhofi ukugqiba ukuseta kwakho okulula.
Ewe kunjalo, awunyanzelekanga ukuba uyilinganisele ikofu njengoko unokubamba iibhegi ezimbalwa zeti, iisiraphu, ezinye iikomityi kunye neesosi ukuze wandise ukusetyenziswa kwesikhululo sakho esilula kwaye unganiki kuphela abo basela ikofu.
Ibha encinci yasekhaya
Ukuba unesithuba esilinganiselweyo sekhitshi, unokuguqula iishelfu ezivulekileyo zibe yibha encinci yasekhaya. Oku ngekhe kuphazamisane nendawo yakho yomgangatho oxabisekileyo, kodwa iphindaphinde umboniso woluhlu lotywala obusebhotileni. Unokongeza iiglasi ezimbalwa kwaye uzidibanise nezixhobo zebar zakudala ze-vibe eyongezekileyo.
uyithenga njani icebo lokucoca snapchat
Ukuguqula iishelufa ezivulekileyo zibe yindawo yokubeka iziqholo akonyusi kuphela ukusebenza kwekhitshi lakho kodwa ikwabonelela ngendawo ebonakalayo enomdla. Izinongo ezigcinwe kwiibhotile ezincinci ezintle kunye neengqayi zilungile nje ukuba zijongwe. Kodwa ukuba ungumntu othanda ngokwenene ukupheka, uluhlu lweziqholo oluboniswe kwishelufa evulekileyo lwenza umsebenzi wakho ubelula. Ngaphandle kweziqholo, ungasebenzisa iishelufa ezivulekileyo zokugcina izinongo okanye ii-condiment oqhele ukuzisebenzisa.
Ukuba uneiglasi ezikhethekileyo ezifana neebhola eziphezulu, i-stemware, iibhotile, iiglasi zewayini, iiglasi zemartini okanye iiglasi eziqhelekileyo zokusela, ishelufu evulekileyo inika indawo eyaneleyo yokubonisa ingqokelela yakho. Iiglasi zingenza iishelfu ezivulekileyo zibe nomtsalane ngakumbi, ngelixa kwangaxeshanye izinto zazo ezicacileyo zibonisa ukukhanya kwaye zinokwenza kwangoko indawo ibonakale ipholile kwaye ikhanya ngakumbi.
Eyona ndlela yokugcina iiglasi kwishelufa evulekileyo kukuyibeka phantsi ukuthintela uthuli lweembovane ukuba lungangeni kuyo. Iiglasi zokusela ezisetyenziswa yonke imihla zilungele ukubanjwa, kodwa ngamanye amaxesha ezingasetyenziswanga kangako, kusenokufuneka uhlambe ngokukhawuleza ukuze uqiniseke ukuba zicocekile.
Iingqayi zokugcina ezomeleleyo ezishelfini ngumbono othandekayo nakweliphi na ikhitshi. Nokuba zinemibala okanye zicacile, iingqayi zokugcina ngamanye amaxesha zinokwenza ukuba ikhitshi lizive lifana nasekhaya kwaye linomtsalane. Izimbiza zeMason, ngokukodwa zizinto zokuhombisa ezithandwayo kwiishelufa ezivulekileyo kwikhitshi lendlu yefama. Ukongeza kubuhle obuzisayo, ukuzigcina kwishelufa evulekileyo kunceda ukukhulula indawo yokuxabisa kwaye unike nendawo yakho yokusebenza. Kuyanceda kakhulu kuba unokufikelela ngokulula xa uyifuna.
I-porcelain emhlophe, isidlo sangokuhlwa esimhlophe, njl.
Enye ingqokelela enokuthi iboniswe kwishelufa evulekileyo yi-porcelain emhlophe. Yonke imiboniso emhlophe inokunceda ukuqhekeza udonga oluxakekileyo. Ukuba unebhodi ebalabala enombala okanye udonga lwamatye, iziqwenga ezimhlophe ezilula zibonelela ngokwahlukileyo, ngelixa ikhitshi lakho linombala omnye, umboniso omhlophe wenza indawo ikhanye ngakumbi, ibe nomoya kwaye ibe lula emehlweni. Oku kusebenza kakuhle phantse nasiphi na isitayile sasekhitshini, nokuba sisiko lesiqhelo, langoku, lotshintsho okanye langoku.
Amacwecwe anemibala, izitya kunye nesitya sangokuhlwa
Kwelinye icala, ungasebenzisa iziqwenga ezimibalabala endaweni yokubonisa i-porcelain emhlophe. Izinto ezinemibala zinokongeza uphawu kwindawo emnyama. Ishelufu evulekileyo ikwabonelela ngeyona ndawo ifanelekileyo yokwazisa umbala omtsha we-aksenti kwiphalethi yakho, ngakumbi ukuba ukujonga okupheleleyo kwekhitshi lakho akuthathi cala.
Ngaphandle kwesidlo sangokuhlwa, ishelufu enzima evulekileyo inokuhamba neembiza, iipani kunye nezinto zokupheka ezizodwa. Unokubeka iipani zekhekhe, iitreyi, izitya ze-casserole, iimbiza zepasta okanye izitya zokubhaka kwishelufa njengoko kunciphisa isidingo sokuyikhangela ngasemva kwiikhabhathi zakho. Ukongeza, zisebenza kakuhle njengenqaku elibonakalayo kwiikhitshi ezine-rustic vibe okanye i-industrial flare.
Ishelufu edadayo kunye neencwadi zokupheka ezimbalwa ezinentetho oyithandayo yiya kwiiresiphi ziluncedo kakhulu kubanini bamakhaya abakuthandayo ukupheka. Ngaphandle kweencwadi zokupheka, ungabandakanya iincwadi zetheyibhile zekofu okanye ezinye zezinto zakho zokufunda ozithandayo onokuthi uzithathe ngelixa usonwabela ikomityi yekofu kwikhawuntara yakho yebar okanye isidlo sakusasa.
Amacwecwe okuhombisa: Umsebenzi wobugcisa, imifanekiso eqingqiweyo encinci kunye nezinto eziyilwe
Izinto ezincinci zokuhombisa ezinjengemifanekiso eqingqiweyo kunye nomsebenzi wobugcisa zongeza uphawu olongezelelekileyo ekhitshini lakho. Ngamanye amaxesha, olu hlobo lwezixhobo zifuneka kakhulu ukugqibezela ukubonakala kwekhitshi lakho. Ukongeza kumaqhekeza amancinci, ungasebenzisa ishelufu yakho evulekileyo njengodonga lwezithombe ukubonisa iifoto zosapho ezinemifanekiso okanye imifanekiso emnyama nemhlophe.
Izityalo zangaphakathi kunye neeSucculents
Izityalo zangaphakathi zinegalelo lokuphefumla umoya omtsha kunye ne-vibe ehlaziyayo kwindawo exakekileyo njengekhitshi. Sebenzisa amashalofu avulekileyo ukubonisa izityalo ezincinci ezinamanzi kunye nezityalo zokugcina eziphantsi njengee-succulents.
Ukuvulwa kwishelufa ekhitshini akusoloko kufuneka kugcwaliswe ngezinto ezininzi kunye nokuhonjiswa. Kwezinye iisetingi, ufuna kuphela umboniso omncinci, njengesiqwenga sesityalo sangaphakathi esifakwe embizeni, ukuze utshatise ukujongwa okuphakathi kwendawo.
Ngolwazi oluthe kratya olunxulumene nolu phepha Uhlaziya njani iikhabhathi zasekhitshini .
URae Dunn Igumbi lokuhlambela iimpahla ... $ 29.99 umthengisi ogqibelele (138) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iishelufu zodonga oludadayo uPhilly Wall,… $ 45.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-340 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Knape kunye neVogt USC15-2-35PT In-Cabinet Sof… $ 174.99$ 200.25 umthengisi ogqibelele (300) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
UMASIFUNDISANE WE-BAOBAB OUSHOPHA Wokhuni Oludadayo… $ 64.99$ 84.99 umthengisi ogqibelele (1319) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Inkosazana yomtshato womtshato
utshata njani enkundleni yamatyala
iikhabhathi ezingaphezulu kwesinki
imibono yokuhombisa iiholo zomtshato
Iqela le-bachelorette t shirts izimvo